म्यान्चेस्टर आइपुगे 'नयाँ नेयमार', इत्तेहादमा के ल्याउँदैछ जेससको आगमनले ?
म्यान्चेस्टर आइपुगे ‘नयाँ नेयमार’, इत्तेहादमा के ल्याउँदैछ जेससको आगमनले ?
म्यान्चेस्टर, २० पुस । ‘नयाँ नेयमार’ भनिएका ब्राजिलियन स्टार गाब्रिएल जेसस म्यान्चेस्टर आइपुगेका छन् । गत समरमा २७ मिलियन पाउण्डमा म्यान्चेस्टर सिटीसँग अनुबन्धित भएका जेससले त्यतिबेला नै सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार जनवरीबाट पेप ग्वार्डिओला नेतृत्वको इंग्लिश टोलीका लागि खेल्न लागेका हुन् ।
ब्राजिलियन च्याम्पियन पाल्मेइरसले जारी लिग सिजनको अन्त्यमा मात्र जेससलाई विदा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यो अवधिमा जेससले पाल्मेइरसलाई ब्राजिलियन शीर्ष लिगको उपाधि जिताउन मुख्य भूमिका खेले ।
ब्राजिलबाट विदा हुनुअघि जेससले इन्स्टाग्राम इमोशनल पोस्ट गर्दै आफ्ना समर्थक तथा परिवारसँग विदा मागेका छन् ।
‘यो पत्र लेख्दै गर्दा भावनालाई नियन्त्रण गर्न मलाई निकै गाह्रो परिरहेको छ,’ जेससले लेखेका छन्, ‘परिवार र मेरा समर्थकहरुसँग छुट्टिनु पर्दा निकै दु:ख लागेको छ ।’
उनले अघि लेखेका छन्, ‘मेरो दिमागमा अहिले एउटा फिल्म झलझली आइरहेको छ । एउटा ह्याप्पी इण्डिङवाला फिल्म, जसले भन्छ, जीवन धेरै छिटो बित्छ, जबसम्म तिमीसँग समय छ त्यसमा इञ्जोइ गर ।’
जेससको इन्टाग्राम पोस्टमा अघि लेखिएको छ, ‘पाल्मेइरससँगको प्रत्येक सेकेण्ड निकै सुखद् रह्यो । यो टिमले मलाइ करियर, बेटर लाइफ, साथीसहित सबैथोक दियो, मेरो सपना साकार बनायो । पाल्मेइरस मेरो निकै उत्कृष्ठ पाठशाला हो ।’
जेससको आगमनले के ल्याउँछ इत्तेहादमा ?
१९ वर्षिय जेसस मेस्सी तथा नेयमारपछि दक्षिण अमेरिकाबाट निस्किएका स्ट्राइकरमध्ये सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरिएका खेलाडी हुन् । सन २०१६ मा नै ब्राजिलियन राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यु गरेका उनले ६ खेलमा ५ गोल गरेका छन् । यस्तै ब्राजिलयन युवा टोलीलाई ओलम्पिक गोल्ड मेडल जिताउनमा पनि जेससको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।
यस हिसाबले हेर्दा जेससको उपस्थिति म्यान्चेस्टर सिटीका लागि निकै ठूलो बूस्ट हो । लिगमा पहिलो राउण्ड सकिएर दोस्रो राउण्डको पनि एक खेल खेलिसकेको सिटी ४२ अंकसहित अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको लिग लिडर चेल्सीसँग उसको अन्तर ७ अंकको छ ।
सिटीले यस सिजन लिगमा खेलेका २० खेलमध्ये १३ मा जित, ३ मा बराबरी र ४ खेलमा हार ब्योहोरेको छ । उसका मुख्य स्ट्राइकर तथा सर्वाधिक गोलकर्ता सर्जियो एग्युरोले प्रतिबन्धकै कारण यसमध्ये ७ खेल खेल्न पाएनन् । अब जेससको उपस्थितिले सिटीको अग्रपंक्तिमा निकै राम्रो विकल्प थपिएको छ ।
तिब्र गति, गोल स्कोरिङ क्षमता तथा डि बक्समा महत्वपूर्ण पास उपलब्ध गराउनमा माहिर जेससले अरु केही नल्याए पनि इत्तेहाद स्टेडियमका खाली कुर्सी भर्न समर्थक भने पक्कै ल्याउने इंग्लीश फुटबल पण्डितहरुको विश्लेषण छ ।
घरेलु मैदानमा देखिने खाली कुर्सीलाई लिएर आलोचकहरुले म्यान सिटीको खिल्ली उडाउने गरेका छन् । ति कुर्सीहरु पेपको उपस्थितिले समेत भरिएका छैनन् ।
म्यानसिटीले आगामी शुक्रबार एफएकप तेस्रो राउण्डमा वेस्टह्याम युनाइटेडसँग खेल्दै छ । पेपले सोही खेलमा नै जेससलाई पहिलोपटक टिममा समावेश गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
प्रहरीद्वारा जडेजाकी पत्नी रीवामाथि कुटपिट
सन्दिपको खेल चर्चा- ‘छोरा हामीले पाएका हौँ, तर पनि सन्दीप नेपाल आमाकै छोरा बनेको छ’
आइपिएल : प्लेअफ खेलहरु आजबाट
स्वेदश फर्कँदै सन्दीप
विश्वकप २०१८ः कालिनिन्गराड स्टेडियमबारे जान्नुहोस् यी तथ्यहरु
विश्वकपका लागि बेल्जियमले २३ जना खेलाडीको टुंगो लगायो
स्पेनले गर्‍यो विश्वकपका लागि अन्तिम २३ सदस्यीय खेलाडीको घोषणा
विश्वकपका लागि पोर्चुगलको अन्तिम २३ खेलाडीको सुची सार्वजनिक
सन्दीप लामिछाने भोलि नेपाल फर्किने
आइपीएल : प्लेअफमा पुग्ने अन्तिम टीम बन्यो राजस्थान
विश्वकप २०१८ः इकाटेरिनबर्ग एरिनाबारे जान्नुहोस् यी तथ्यहरु
सिजनको अन्तिम तर रोमाञ्चक खेलः इन्टर मिलान ९ जनामा सिमित लाजियोलाई हराउँदै च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट
यस सिजनको स्पेनिस लिग ला लिगा सकियो: यी क्लबहरु भए रेलिगेट, च्याम्पियन्स लिगका लागि यी क्लबहरु भए छनोट
आइपिएलः प्ले अफमा पुग्न सकेन पञ्जाब, चेन्नईले ५ विकेटले हरायो